Golden State Warriors Oo La Kulantay Jabkii Ugu Weynaa Muddo 13 Sannadood Ah - Cadalool.com
Golden State Warriors Oo La Kulantay Jabkii Ugu Weynaa Muddo 13 Sannadood Ah
Kooxda Golden State Warriors ee haysata horyaalka NBA-da Maraykanka ayaa xalay la kulantay guul-darradeedii ugu waynayd muddo ka badan 12 sannadood kaddib markii lagu tumay goolashii ugu badnaa.
Golden State Warriors oo mar hore diyaarsatay booskeeda marxaladda labaad ee Playoffs-ka ayaa waxay xalay la ciyaartay Dllas Mavericks, balse waxay kala kulantay guul-darradeedii afraad ee bishan gudaheeda.
Tababaraha Golden State Warriors ayaa qaatay go’aan ah inuu nasiyo xiddiga hoggaamiya naadigiisa ee Stephen Curry, balse wuxuu ka natiijo lama filaan ah oo aanu meeshaba sii dhiganin, waxaana markii ugu horreysay tan iyo 2007 lagaga adkaaday dhibcihii ugu badnaa iyadoo ay Dallas Mavericks ka sarraysay 35 dhibcood.
Warriors oo ku ciyaaraysay garoonkeeda ayaa waxay la timid 91 dhibcood, halka Mavericks ay dhashatay 126 dhibcood, waxaana sidaas loogu diiwaangeliyey natiijadii ugu liidatay tan iyo 2007, waxaana canaanta oo dhan dusha laga saaray tababare Steve Kerr oo tan iyo sannadkii 2014 ahaa macallinka guulaha badan u horseeday.
Luka Doncic ayaa Mavericks u dhaliyey 23 dhibcood, waxaana liiska halyeeyada NBA-da boos adag kasii samaysay Dirk Nowitzki oo shan saddexlay dhaliyey iyadoo usbuucii horena loo aqoonsaday ciyaartoyga lixaad ee dhibcihii ugu badnaa ka dhaliyey NBA-da.
Inkasta oo ay guuleysatay, Mavericks ma laha wax rajo ah oo ay Playoff-ka ku timaaddo waxaanay kaalinta labaad ee sagxadda hoose fadhidaa qaybta galbeedka ee NBA-da, balse Warriors ayaa xilli horeba xaqiijisatay booskeeda Playoff-ka iyadoo 49 jeer guuleysatay 23 na laga adkaaday xili ciyaareedkan.
Marxaladda labaad ee Playoff-ka oo bilaabmi doonta 13 April ayaa ay Golden State Warriors usii nasisanaysaa ciyaaryahanneeda muhiimka ah, waxayse Isniinta garoonkeeda Oracle Arena kusoo dhoweyn doontaa Detroit Pistons.